Weedho gaagaaban oo nolosha ah oo lagu sawiro luqado kala duwan | Tattoo
Weedho gaagaaban oo nolosha ah oo loogu sawiro luqado kala duwan
ka Oraahda nolosha gaagaaban si loo sawiro had iyo jeer waa mid ka mid ah nashqadaha aan aad u jecel nahay. Waa maxay sababta, waa hagaag, maxaa yeelay waxay tilmaamayaan xaalad maskaxeed iyo xaaladaha badankood, waxay nagu hogaaminayaan fikrad aad u rajo badan. Hab loo wajaho maalin kasta aragti kale.
Taasi waa sababta ay u jiraan dad badan oo doorta jumladaha gaagaaban ee nolosha si ay u helaan tattoos. Dabcan, haddii aad horey uga fikirtay, hubaal shaki cusub ayaa kugu soo wajahan. Maaddaama ay jiraan noocyo badan oo la kala dooran karo,luqaddee ayaad ku sawireysaa weedha waa su’aale? Maanta waxaan kuu daynaynaa kuwa ugu xulashada badan uguna asalka badan luuqadaha kala duwan.
1 Weedho gaagaaban oo nolosha ah oo lagu sawiro
1.1 Weedho gaagaaban oo Isbaanish ah
1.2 Weedho gaagaaban oo Laatiin ah
1.3 Erayada loogu talagalay tattooing ee Ingiriisiga
1.4 Oraahda ku qoran Faransiiska
Weedho gaagaaban oo nolosha ah oo lagu sawiro
Haddii xukun gaaban aan ku dhihi karno wax ka badan inta aan ka fikirno. Maahan in la doorto naqshad aad u dhib badan si loo helo natiijo weyn. The Tattoo yar waxay ka kooban yihiin qurux gaar ah. Dabcan, kiiskan macnaha weedh kasta ayaa lagu daray. Maxaa u horseedi kara shaqooyinka dhabta ah ee farshaxanka.
Weedho gaagaaban oo Isbaanish ah
Waxaan ka bilaabaynaa jumlado gaagaaban oo Isbaanish ah, kuwaas oo sida aad qiyaaseyso, ay tiro badan yihiin. Dabcan, waxaan marwalba diyaar u nahay inaan kuusoo bandhigno soo koobitaankooda ugufiican iyaga.
Noloshu way adagtahay, waan ka adagnahay: Shaki la'aan, weedh isku kalsooni weyn laakiin taasi waxay noo horseedaysaa inaan nolosha ugu wajahno si togan.
Xanuunku waa lama huraan, dhibaatadu waa ikhtiyaari: Immisa jeer ayaad aragtay sawirkaan. Wali guul ayey noogu muuqataa.
Adiga ayaa go’aaminaya inta aad rabto inaad duusho: Sababtoo ah cidina ma jabin karto baalashaada, ama waxaad rabto ama yoolalkaaga.
Riyo aad u weyn ma jirto, cirku waa xadka: Mar labaad, xadadka noloshaada adigaa dejiyay. Hadaad riyo leedahay, inaad u dagaalanto.
Weedho gaagaaban oo Laatiin ah
La Quruxda Latinka Waxay sidoo kale ka muuqataa jumladaha gaagaaban ee nolosha si loo sawiro. In kasta oo loogu yeero luuqad dhimatay, haddana wali nolol badan ayaa u hartay oo waxay ahaan doontaa, maqaarkayaga. Tusaalooyinka soo socda keebaa aad jeceshahay?
Carpe Diem: Mid ka mid ah jumladaha ugu badan ee la xardho ayaa ah tan. Shaki la'aan, hab aan nafteenna ugu sheegno inaan ku nool nahay xilligan iyo xilligan.
Amat curam guul: Guushu waxay noqon doontaa kuwa dadaala. Markaa, haddii aad rabto wax uun noloshan, waa inaad ku hesho halgan iyo adkeysi.
Rough dum spiro: Inta aan neefsanayo, rajo ayaa jirta. Mid ka mid ah weedhaha ugu rajo wanaagsan ee ay tahay inaynu ku dabaqno nolosheena. In kasta oo mararka qaarkood aan ku dhowaad ka quusanno, haddana mar walba waxaa jira waddo looga baxo.
Ha welwelin: Ogow naftaada. Marka hore waa inaan si fiican u ogaanno cidda aan nahay iyo waxa aan dooneyno, si waddadu ay uga fududdahay sida aan fileyno.
Erayada loogu talagalay tattooing ee Ingiriisiga
Mid ka mid ah luqadaha caalamiga ah kama maqnaanin dhoolatuskan weedho gaagaaban oo lagu sawirayo. Oraahda Ingiriisigu waa amarka maalinta. Marka, halkan waxaan kaaga tagaynaa kuwa ugu aragtida badan ama la yaqaan, iyo sidoo kale asalka.
Farxad: Shaki la'aan, weedh kooban oo aad u badan. Faraxsanaantu waa mid ka mid ah himilooyinka waaweyn ee aan nolosha ku leenahay. Marka, waa inaan ku dhaqanno tusaale ahaan si aan halkaas u tagno.
Noolow maalin kasta sidii ay ahayd adiga oo ugu dambeeya: Waa inaad u noolaataa maalin kasta sidii inay tahay tii kuugu dambeysay. Weedh run ah!
Shalay wax ka baro, maanta noolow oo berri rajo: Waa inaad shalay barataa, ku noolaataa kuna raaxeysataa waxa jira oo aad rajo ka qabtaa inaad berrito wajahdo.
Jeclow nolosha aad ku nooshahay: Ciqaab dhammaystiran oo laguu sheego inaan jeclaano nolosha aan ku nool nahay.
Oraahda ku qoran Faransiiska
Maxaan ka dhihi karnaa luqadda Faransiiska? Shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa loo arko inuu yahay mid aad u jilicsan. Waxaa laga yaabaa inaad ku mahadsantahay sida qaar ka mid ah kuwan weedho qurux badan oo Faransiis ah oo waad ku madoobi kartaa tayadan.
L'essentiel est aan la arki karin ku shub les yeux: Waxaan indhaheena u adeegsanaa si aan u aragno wax kasta oo hareerahayaga ku wareegsan, laakiin waa inaan ogaano in waxa ugu muhiimsan nolosha ay tahay wax aan indhaha laga arkeyn
Comprendre, cafiska ugu weyn: In wax la fahmo waa cafis.
Aad baan u jeclahay: Tani waa nolosha waana tan sida ay tahay inaan ugu noolaano si buuxda.
Waa suis ce que je suis: Waxaan ahay waxaan ahay.
Ingiriis, Faransiis, Isbaanish ama Laatiin waa qaar ka mid ah luqadaha sida aadka ah loo dalbado markaan raadineyno weedho aan ku sawirno Xaaladaha badankood, luqadda lafteeda waxba kuma xirna, laakiin wax kasta oo ay ku jiraan mid kasta oo ka mid ah weedho gaagaaban oo aan maanta ku tusnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Weedho gaagaaban oo nolosha ah oo loogu sawiro luqado kala duwan
page aad u wanagsan
Aad baad ugu mahadsantahay ereyadaada, Liz! 🙂
Tattoo wadnaha oo jabay
Tattoo-ga cusub ee Candelaria Tinelli: qaabka madow ee qoorteeda